“Ny maso rehetra amin'ny valin'ny fitoviana” amin'ny fitsarana Bermuda dia mandray fanambadiana mitovy fananahana
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » “Ny maso rehetra amin'ny valin'ny fitoviana” amin'ny fitsarana Bermuda dia mandray fanambadiana mitovy fananahana
Vaovao Mafana Bermuda • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • LGBTQ • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Tamin'ity herinandro ity, ny Fitsarana ambony any Bermuda dia nandahatra telo andro hiadian-kevitra am-bava amin'ny fampiakarana fitsarana ambony momba ny fanambadiana nasionaly nanomboka ny Alarobia 7 Novambra ka hatramin'ny Zoma 9 Novambra 2018.
Ireo mpangataka nahomby tao amin'ny Fitsarana Tampony, Maryellen Jackson sy Roderick Ferguson dia nilaza tamin'ny fanambarana iray fa: "Manetry tena izahay noho ny fanohanana nomena anay nanomboka ny fotoam-pitsarana voalohany anay ary mijanona eo amin'ny lalanay izahay amin'ny fiarovana an'io antso io ataon'ny governemanta. Betsaka ny asa tokony hatao eto amin'ny nosy mba hampandrosoana ny fahasamihafana sy ny fampidirana. Ity dia fomba iray ahafahanay manampy amin'ny fanamafisana ny zavatra niainan'ireo Bermudianina gay sy vehivavy miralenta izay manaiky ny maha-zava-dehibe ny fananganana fanambadiana amin'ny fiarovana ny ankohonany. ”
Ny mpitondra tenin'ny OUTBermuda, Adrian Hartnett-Beasley, dia nilaza fa: “Tanjona iray no tanjontsika: ny fitoviana eo ambanin'ny lalàna ho an'ny mpivady Bermuda sy ny fianakavianay rehetra. Amin'ity herinandro ity, mino izahay fa ny fitsarana avo indrindra dia mety hahatratra ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Fitsarana Tampony tamin'ny volana Jona, rehefa nanapa-kevitra ny lalàna momba ny fiaraha-miasa ao an-toerana izay manitsakitsaka ny lalàm-panorenantsika izay miaro tsy ny fahalalahantsika hanana feon'ny fieritreretana ihany fa amin'ny fanakanana ny fanavakavahana noho ny fanekem-pinoana. Ny masonay rehetra dia mijery ny lokan'ny fitoviana. ”
Nanantitrantitra indray i OUTBermuda fa manohana ny zon'ny fiaraha-miasa ao an-toerana ny safidin'ny Bermudianina rehetra, fa tsy mandany vola amin'ny fandavana ny fanambadiana ho an'ny sasany, indrindra ny mpivady.